विकासमा जुट्दै उपमहानगर
बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका विकास निर्माणमा जुटेकोे छ । दोस्रो नगरसभाबाट पारित योजना कार्यान्वयनका लागि उपमहानगर विकास निर्माणमा जुटेको हो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्र वरिपरि चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । आयोजनाले गोरखा र धादिङतर्फ एक÷एक सय किमि सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो ।
केपाङ निर्माण सुरु
पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्दै आएका लिम्बु समुदायको ऐतिहासिकता जोडिएको केपाङ निर्माण सुरु गरिएको छ । जिल्लाको छथर गाउँपालिकाको केन्द्र शुक्रबारे बजारमा १ करोड बराबरको लागतमा केपाङ निर्माण सुरु गरिएको हो ।
लगानी तथा प्रविधि आकर्षणमा चीनले सहयोग बढाउने
नेपालका लागि चीनका राजदूत यू होङले नेपालमा प्रविधि तथा लगानी विस्तारमा जोड दिने बताएकी छन् ।
नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय प्रसारण लाइनको योजना
सन् २०४१ भित्र बंगलादेशले नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने घोषणासँगै यसका लागि त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ । बंगलादेश सरकारले आफ्नो योजनामै नेपालबाट बिजुली किन्ने उल्लेख गरेपछि सिधै जोडिने गरी सरकारले नेपाल–भारत–बंगलादेश जोड्ने ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको हो ।
नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त समयः प्रम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानीका लागि नेपालमा अहिले उपयुक्त समय भएका बताएका छन् । कारोबार दैनिकले आयोजना ‘कारोबार इकोनोमिक कन्क्लेभ’ मा बोल्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त समय रहेको बताएका छन् । उहाँले तीव्र गतिमा आर्थिक विकासका लागि विभिन्न कोणबाट काम भइरहेको भन्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो मुनाफा कमाउने उपयुक्त अवसर भएको बताए ।
दाङमा प्रादेशिक कार्यालय
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका २ वटा सरकारी कार्यालयल दाङमा स्थापना गरिएको छ । कार्यालयको बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उद्घाटन गरिएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत जिल्लामा पहिलो पटक यी कार्यालय स्थापना गरिएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनको स्वामित्वमा रहेको गेष्ट हाउस चौरमा सिटीहल बन्ने पक्का भएको छ । भरतपुर महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेपछि जिससले बुधबार दलका प्रमुखको रायसुझाव मागेको थियो । अब गेष्ट हाउस चौरमा ५ हजार क्षमताको सिटी हल बन्ने बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानीका लागि मुख्य चार समस्या रहेको बताएका छन् ।
किसानको कहर, छैन कसैको भर
पालुङटार नगरपालिका–१ खोप्लाङ दरौदीफाँटका ६९ वर्षीय भीमबहादुर कुमाल टन्टलापुर घाममा धानको रोपो गोड्दैछन् । घुँडा टेकेर धान गोडेका उनको हिलाले खाएको खुट्टा प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।
कमल बजारको वायुऊर्जा सञ्चालन
अछामको कमल बजारमा रहेको वायु तथा सौर्य ऊर्जा अवरुद्ध भएको ७ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । २०७४ माघ १० गते चट्याङले क्षति पु¥याएपछि पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको विद्युत् सेवा भदौ २० गतेबाट दैनिक ८ घण्टा सञ्चालनमा आएको कमल बजार वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिका अपरेटर शिवराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
काठमाडौंमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउँदै प्राधिकरण
काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली बनाउने भएको छ । त्यस्तो प्रसारण प्रणालीलाई काठमाडौं उपत्यकका प्रसारण ‘रिङ’ नाम दिइएको छ ।
मुक्तिनाथ पुग्न ८४ किलोमिटरको केबलकार बन्ने
पश्चिम नेपालको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ मन्दिर जाने केबलकार निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । लगानी बोर्ड र मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिबीच मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म केबलकार विकास तथा सञ्चालनका लागि समझदारी भएसँगै प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
स्थानीयको अवरोधले दुई दिनदेखि मध्यमोदी ठप्प
पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नं. २ मा चौधरी ग्रुपले निर्माण गर्दै गरेको मध्यमोदी जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयको अबरोधका कारण दुई दिनदेखि निर्माणकार्य ठप्प बनेको छ ।